Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoha Rajoelina : Mbola ao an-damosiny ve ireo nifidy azy ?
Filoha Rajoelina : Mbola ao an-damosiny ve ireo nifidy azy ?
Raha ny tokony ho izy dia tapaka omaly teo anivon’ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra ny hitsivolana noraisin’ny filohampirenena ho amin’ny lalàna manitsy ny teti-bolam-panjakana amin’ity taona 2019 ity.
Fepetra takian’ny tontolon’ny fitantanam-blolam-panjakana ny tsy maintsy anitsiana ny lalàna mifehy ny teti-bola toa izany satria ny lalàna nolanian’ny Parlemanta alohan’ny faran’ny taona isa-taona dia karazan’ny vonjimaika ihany. Nifototra hatrany tamin’ny lalàna nifehy ny teti-bola teo alohan’iny taona hifarana iny ary nifototra tamin’ireo tetik’asa natrehina sy fandaniana mbamin’ny fampidiram-bolam-panjakana natao nadritra iny taona hifarana iny. Ny fivoriana ara-potoana voalohany fanaon’ny Parlemanta isaka ny volana may toa izao no anitsiana ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana amin’iny taona itsahina iny. Koa satria tsy mbola misy ny Antenimierampirenena amin’izao fotoana ary efa nampindramin’ny solombavambahoaka farany teo fahefana hanao lalàna amin’ny alalan’ny hitsivolana ny filohampirenena, ka isan’ny nahazoan’ny filohampirenena fahefana momba izany ity fanitsiana ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana ity, dia izao nodinihana omaly ka notapahina izao.
Amin’ny maha-hitsivolana azy moa dia « sady lalàna ilay izy no didim-panjakana » (décret loi). Izany hoe ny fankatoavan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (HCc) azy no handrasana izany dia hivoaka hanan-kery izy io, ka ho azon’ny fitondram-panjakana hatao ny mampihatra azy. Izany hoe ny fampidiram-bolam-panjakana rehetra dia hifototra amin’io hitsivolana io ary toraka izany koa ny famoaham-bolam-panjakana rehetra.
Ny somary nitera-pahasahiranana ho an’ny mpitondra fanjakana tao anatin’izay efa-bolana lasa izay dia ny tsy fahafahan-dry zareo namoaka vola firy tao anatin’ny kitapom-panjakana noho ny fepetra tsy azon’izy ireo nodikaina satria ity lalàna enti-manitsy ny teti-bolam-panjakana ity no tena ahafahana miasa.
Maro, noho izany, ireo tetik’asa tsy maintsy niandry izao lalàna fanitsiana ny teti-bolam-panjakana izao, ary na ny fampihodinan-draharaha andavanandron’ny fanjakana aza, dia zary voafehifehy be ihany.
Ny dikan’izany koa dia tokony haneho ny fahaizany miasa haingana ny mpitondra mba hanaporofoana amin’ny vahoaka fa mahavita mampahomby sy mampivaingana ny asa voafaritra, satria efa hivoaka tsy ho ela izany izao ny vola. Ny tetik’asa niankina tamin’ny famatsiam-bola ivelan’ny kitapom-bolam-panjakana mivantana aloha dia tsy voakitikitika na voahelingelin’izao fepetra momba ny teti-bolam-panjakana ankapobeny izao fa nandeha, raha afaka nampihodina azy ny tompon’andraikitra.
Hiankina betsaka amin’izay hakingan’ny mpitondra mampivaingana ny asa ataony manomboka amin’izao fotoana koa ny ho fahavitrihan’ny vahoaka hifidy an’ireo kandida atolotra ny vovonana miara-dia amin’ny fitondrana amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao.
Aza hadinoina fa miankina betsaka amin’ny fihetsika sy ny fahombiazana amin’ny ataon’ny mpitondra ny hifidianan’ny mpifidy na tsia ny kandida miara-dia amin’ny mpitondra fa tsy mandeha ho azy hoe “nifidy ny filoha Rajoelina izy tamin’ny volana novambra 2018 dia hifidy ho azy ny kandida ho depiote miara-dia amin-dRajoelina amin’izao volana may izao”. Io fifidianana depiote io izany no hanaporofoana hoe “mbola manohana ny fitondrana Rajoelina ve ny mpifidy maro nanome fitokisana azy sa efa nisy ireo niala taminy?”